EVY's Kitchen: ကညွတ်ကြော် အစပ် (Balacan Asparagus)
ကညွတ်ကြော် အစပ် (Balacan Asparagus)
ဒါ TTSweet ရဲ့ကြော်နည်းနဲ့ ကြော်ထားတဲ့ကညွတ်ကြော်ပါ။ အိမ်မှာအရမ်းကြိုက်ကြပါတယ်။ ငါးပိနဲ့ခပ်စပ်စပ်လေးမို့လို့ ဗမာပါးစပ်နဲ့တော့ အတော့်ကိုအဆင်ပြေနေတာပါ။
-ငါးပိ လက်ဘက်ရည် ဇွန်း၁ဇွန်း
-အရောင်တင်မှုန့် လက်ဘက်ရည် ဇွန်း၁ဇွန်း
အဲဒီ ပစ္စည်းတွေကို blender ထဲမှာကြိတ်။ ကညွတ်ကို အပိုင်းပိုင်လေးတွေဖြတ်ပြီး နဲနဲထုထား၊ ဆီပူအောင်တည် (စားပွဲဇွန်း၁ဇွန်းဆိုရပါပြီ)။ ပြီးရင်ကြိတ်ထားတာလေးတွေဆီသတ်ပါ။ ၂ မိနစ်လောက်နေရင် ကညွတ်ထည့် ရေနဲနဲထည့်ပြီး အဖုံးအုပ်ထားပါ။ အပေါ့အငံမြည်း၊ကညွတ်နူးရင်စားလို့ရပါပြီ။ ထမင်းဖြူလေးနဲ့စားရင်လည်း အရမ်းစားကောင်းပါတယ်။
1 red onion, 1 red chili
1 Tbsp of dry shrimps
1 Tbsp of oyster sacue
1 tsp of Balacan paste
Chop asparagus into small pieces , set aside.
Using blender, blend all the rest of ingredients
Heat 1 Tbsp of oil in the pan and fry the mixed ingredients for 1-2 mins.
Add the chopped asparagus, cover with the lid and cook for about 2mins. Stir occasionally.
Add in 1/4 cup of water and cook for another 2-3 mins.
Dish out and ready to serve. Enjoy!
Posted by Evy at 1:54 PM